HDPE Pressure Zvikwepa uye Fittings Vagadziri - Vinyl Zvikwepa
Fonera Us 24/7
8/33 Kirti Nagar Maindasitiri Nzvimbo, New Delhi
uPVC Column Zvikwepa
uPVC Casing Zvikwepa
UPVC Piezometric Mapaipi
UPVC Pressure Zvikwepa
uPVC Plumbing Zvikwepa
Mvura yekunaya Kukohwa kit
Nhau & Midhiya
mugadziri Wona Range Dhawunirodha Catalog HDPE Pipe
mugadziri Wona Range Dhawunirodha Catalog
Kushanda kweHPPE Zvikwepa
Kudiridza / Kurima
Yechokwadi HDPE Zvikwepa Mugadziri
Vinyl Tubes Pvt Ltd inopa huwandu hwakawanda muHDPE pombi uye zvigadzirwa. Isu tiri IS Standard Kambani uye yekugadzira yakanakisa mhando zvigadzirwa muHDPE Pombi uye Fittings. Zvikwepa zvinogadzirwa kunze kwekuwedzeredzwa maitiro nepo fittings dzichigadzirwa kubva pamapombi pasi penyika dzenyika ISO 9001: 2015 Quality Management System. Pipe's semi-inoshanduka chivakwa inoita kuti ive nyore kubata uye kumisikidza. Vinyl Tubes Pvt Ltd zvakare inopa PE / PP pombi kuisa uye jointing rutsigiro rwezvirongwa pane turnkey hwaro. Zvikwepa zvedu zvakagadzirwa kubva yakakosha pombi giredhi Yakakwira Dhivhosi Poly Ethylene - chemakemikari inert zvinhu izvo zvinopa yakanyanya kukanganisa pamwe neyakagwinyisa simba. Yakagadzirwa pamarudzi epasi kugadzirwa uye kuyedza nzvimbo.
Zvikwepa zvedu zvinokodzera kukwirira kwePipeline
HDPE pombi rudzi rweyakagadziriswa epurasitiki pombi inoshandiswa kuyerera uye gasi kuchinjisa uye inowanzo shandiswa kutsiva kuchembera kongiri kana simbi mains mapaipi. Yakagadzirwa kubva kune iyo thermoplastic HDPE (yakakwira-density polyethylene), mwero wayo wepamusoro wekusagadzikana uye hwakasimba mamoleky bond inoita kuti ive yakakodzera kune yakanyanya kumanikidza mapaipi. Pipe yeHPPE inoshandiswa pasi rese kune zvinoshandiswa senge maombi emvura, gasi maipi, mapaipi esipiji, mitsetse yekutsvedza, kudiridza kwekumaruwa, mitsara yemoto, magetsi uye kutaurirana, uye mvura yemvura yedutu uye mapaipi emvura.
Maitiro: ISO, DIN, ASTM, ISI, BIS.
Dhayamita: 20 mm - 500 mm (1/2 "kusvika 20")
Kureba Kwakazara 6 mita.
Pressure chiyero kubva: PN 2. 5 kusvika 16, SDR 6 kusvika 41
Iyo inochengetedza yakajairika zvivakwa zvemvura mukati.
Moss yakabata nekuda kwenzvimbo yemukati inogona kushandiswa mukunwa masisitimu emvura.
Nekuda kwehunhu hwemakemikari, ine yakanyanya kuramba kumakemikari.
Kutora chimiro uye kutsvedza kwenzvimbo inotsvedza nekuisa zviri nyore kwazvo nekuda kwekuchinja.
Nekuda kwekukwirira kwaro kusimba, kuti ishandiswe munzvimbo mune yakawanda yekuvhunduka zviitiko zvakasununguka. Iyo inogona kuzvitenderedza pachayo zvichienderana nedanho rekufamba kwekufamba kwepasi uye haina kutyora.
Chiedza chakareruka, chakasimba, chinogara kwenguva refu uye chengetedzo yemahara
HDPE Zvikwepa Saizi Chati
Tichiratidza 1 kusvika 10 pa106 entries
Welding uye nzira dzeungano dziri nyore kwazvo.
Nyore kutakura nekuda kwehuremu uye nekudaro kutumira kwakachipa.
Iyo inopesana zvakanyanya neacid uye alkalis. Inokuvara chete ne nitric acid.
Haisi kukanganiswa nepasi pevhu, hapana zvivakwa zvinodzivirira.
Chikamu chakanaka chekupesana, kupfeka uye chine ngura.
Iyo yakasimba kurwisa microorganisms.
Akasiyana Mapaipi Chikamu icho isu chatinogadzira ndeichi: -
Hdpe Zvikwepa (IS: 14333: 1996)
Hdpe Zvikwepa (IS: 4984: 2016)
Hdpe Zvikwepa (IS: 14151)
Hdpe Zvikwepa (ISO 4427 Pt-2)
Wana imwezve bhenefiti
Pipe yeHDPE yakachengeteka here kunwa mvura?
Ehe. Mapaipi eHDPE anozivikanwa nekuda kwekushandisa mvura inonwa anogadzirwa kubva kumanikidza akayerwa polyethylene makomputa anotenderwa neNSF yerubatsiro rwemvura yekunwa neveruzhinji.
Pipe yeHDPE inowanikwa mune ese ductile simbi pombi saizi uye saizi pombi saizi kunze kwemadhayamita?
Ehe, HDPE pombi inowanikwa zvese musimbi pombi (IPS) uye ductile simbi pombi saizi DIP), dzimwe nguva inozivikanwawo seye cast-iron pombi saizi (CIPS). IPS yakakura HDPE pombi ine yakafanana yekunze dhayamita sedema simbi kana kabhoni simbi pombi. DIPS yakakura saizi HDPE ine yakafanana yekunze dhayamita seye cast / ductile iron pipe. Kazhinji, ductile simbi pombi saizi inowanikwa kubva ku4- inch kusvika ku36-inch diameter. Simbi pombi saizi inowanikwa kubva ku ¾- padiki kusvika ku65-inch maamita.
Ko diki dhayamita HDPE pombi uye tubing inowanikwa mune ese esimbi pombi saizi mukati mehupamhi inodzorwa uye yemhangura chubhu saizi?
Ehe, mashoma dhayamita HDPE pombi zvigadzirwa zvinowanikwa mune ese ari mukati dhayamita inodzorwa (SIDR) uye yemhangura chubhu saizi kunze kwe dhayamita inodzorwa (CTS-SDR). Kazhinji, SIDR pombi inowanikwa kubva pa-inch-inch kusvika ku3-inch dhayamita nepo machubhu machubhu zvigadzirwa zvigadzirwa anowanzo kuwanikwa muhukuru ¾-inch kusvika 2-inch.
Ndekupi kunogona kuenzana ruzivo senge yekunze dhayamita, rusvingo ukobvu uye mukati dhayamita yemhando dzakasiyana saizi yeHDPE pombi inowanikwa?
Kazhinji, ivo vanowanikwa mune zvakaburitswa zvinyorwa zveiyo HDPE pombi inogadzira uye mune ASTM zviyero. Ivo vanogona zvakare kuwanikwa muWedzero kuChitsauko 6 chePPI's Handbook rePolyethylene Pipe, 2nd ed.
Chii chinonzi HDPE chinomiririra?
HDPE inomirira High Density Polyethylene.
Ndeipi nzira yakakodzera yekuonekwa kwekudonha muHPPE pombi?
Pombi ye PE inogamuchirwa seye yakadzika kwazvo-inodonhedza-pombi sisitimu inowanikwa (sezvinoonekwa nekushandisa kwayo mukuparadzira gasi rechisikigo) Seipi "zero" inodonha-pombi, hapana chirevo chakakurudzirwa chekuonekwa kwekudonha. Kuonekwa kwekudonha inzvimbo iri kusimukira ine zvakawanda zvekuvandudza tekinoroji. Imwe yemaitiro anovimbisa ndeye nzira yekuteerera, iyo inoteerera ruzha runoburitswa sezvo mvura ichiyerera zvisina kujairika kuburikidza nekuvhurwa kusina kurongwa mupombi. . + C220: L249
Kuve inotungamira ISO 9001 yakasimbiswa manejimendi manejimendi, pombi-yekugadzira mhando kubva kuIndia, isu kuVinyl Tubes, chengetedza zvese zvaunoda zvemvura manejimendi.
nei mapombi evinyl
Nyorera kune yedu Nhau & Chiitiko izvozvi kuti zvigadziriswe.
Une mubvunzo? Click pano
© 2021 Zvese Zvakachengetedzwa
Tora Quote Free
Batanidza With Us
Tora 5% Discount Kubva Kure!
Batanidza Nevaongorori Vedu